ရထားတိုက်၍ သေဆုံးသွားသူကို ဓာတ်ပုံသွားရိုက်ရာမှ သေသူအလောင်းက စကားထပြောတဲ့ဖြစ်ရပ် - APANNPYAY
Home / ထူးဆန်းထွေလာ / ပရလောကအကြောင်း / ရထားတိုက်၍ သေဆုံးသွားသူကို ဓာတ်ပုံသွားရိုက်ရာမှ သေသူအလောင်းက စကားထပြောတဲ့ဖြစ်ရပ်
ရထားတိုက်၍ သေဆုံးသွားသူကို ဓာတ်ပုံသွားရိုက်ရာမှ သေသူအလောင်းက စကားထပြောတဲ့ဖြစ်ရပ်
Apann Pyay 10:26 PM ထူးဆန်းထွေလာ , ပရလောကအကြောင်း Edit
အချိန်က ၁၉၉၀ ကျော်လောက်အချိန်က . . . ။ ဆောင်းတွင်းဘက်လဲဖြစ် ညဘက်လဲဖြစ်တာနဲ့ သူလဲ ( သူဆိုတာ ကျနော်ပြောတဲ့ မှုခင်းဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ ကျနော်.မိတ်ဆွေတစ်ယောက် ) ထုံးစံအတိုင်း လက်ဘက်ရည်လေးသောက် ဆေးလိပ်လေးဖွာလို့ အိမ် ရှေ့ ဝရန်တာမှာ အန်မတန်ဇိမ်ကျနေတာပေါ့ ။ ရာသီဥတုကအေးပေမယ်.လေလေးကတဖြူးဖြူးဆိုတော့ ရေနွေးကြမ်းတစ်အိုးနဲ့ ဟန်ကျပန်ကျဖြစ်နေတုန်း ( .... ) မြို့နယ်ရဲစခန်းက ဖုန်းဝင်လာတယ် ။
အကြောင်းအရာကတော့ သူ့အလုပ်ပေါ်လာတာ ။ သူ့အလုပ်က မှုခင်းဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာ ဓာတ်ပုံလိုက်ရိုက်ရတာ ။ ဖြစ်တာက မီးရထားလမ်းပေါ်မှာ လူတစ်ယောက် ရထားတိုက်ခံထားရတယ်ဆိုတဲ့ ။ ဒီတော့ ကန်မရာလေးဆွဲ ထွက်ရတော့တာပေါ့ ။ ဟိုရောက်တော့ တွေ့လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းက သိပ်မဟန်ဘူး ။ ဘာလို့ဆို လက်တွေ ခေါင်းတွေ ခြေထောက်တွေက လိုက်ကောက်ရမဲ့ပုံစံဖြစ်နေပြီ ။ လူနေအိမ်လည်းဝေးတဲ့နေရာဖြစ်တာကတစ်ကြောင်း ... မှုခင်းဓာတ်ပုံဆရာဆိုတာမျိုးကလဲ သူများမရောက်ခင် မစစ်ဆေးခင်မှာ အမှုဖြစ်ထားတဲ့ ပုံစံကို ဦးဆုံးရိုက်ယူရတဲ့တာဝန်ဆိုတော့ မျက်မြင်တစ်ယောက်ရယ် တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်ရယ်ပေါ့ ။ ဒါပဲရောက်သေးတယ် ။
အဲဒါနဲ့ သူလဲ အလောင်းကို တစ်စစီဓာတ်ပုံလိုက်ရိုက်ရတာပေါ့ ။ အဲဒီဆောင်းညက အရမ်းအေးတယ် ။ ဟိုးဘက်အဝေး ခပ်ပြပြလောက်မှာတော့ ဘူတာရုံလေးက မီးမှိန်မှိန်နဲ့ ငုတ်တုတ် ။ မြူကလဲခပ်ဆိုင်းဆိုင်းနဲ့ ညတစ်နာရီလောက်တော့ ရှိပြီနဲ့တူတယ် ။ ခုနကပြောတဲ့ မျက်မြင်သက်သေ သတင်းပေးသူကိုတော့ ရဲတစ်ယောက်လာပြီး စစ်ချက်လေးဘာလေးယူဖို့ စခန်းကိုခေါ်သွားလေရဲ့ ။ ကျန်ခဲ့တာ သူနဲ့ မှုခင်းရဲတစ်ယောက်ရယ်ပေါ့ ။ သူ့အလုပ်က လွယ်တော့မလွယ်ဘူးရယ် ။ အချိန် နေရာ ဒေသမရွေး လိုက်ရတာ ။ မှားလို့မဖြစ်ဘူး ။ ဒါနဲ့ သူလဲ အာရုံစိုက်ပြီး အလောင်းရဲ့ အပိုင်းအစတွေကို ဓာတ်ပုံတစ်ဖျတ်ဖျတ်နဲ့ လိုက်ရိုက်နေရတာပေါ့ ။ ဟိုဘက်ရှာ ဒီဘက်ရှာနဲ့ ခေါင်းကိုသွားရိုက်လိုက် ခန္ဓာကိုယ်ကိုသွားရိုက်လိုက် မြေပြင်အနေအထားကိုသွားရိုက်လိုက် နဲ့ ဆေးလိပ်လေးဖွာလို့ အလုပ်ရှုပ်နေတာ ။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ သူနဲ့အတူရှိနေတဲ့ ရဲက ဘယ်ပျောက်သွားတယ်မပြောတက်ဘူး ။ အဲဒါနဲ့ပဲ သူလဲ သူ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်ရတာပေါ့ ။
သူ့မှာအကျင့်တစ်ခုရှိတယ် ။ သူက အလုပ်လုပ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ... စာဖတ်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဥပမာ ထမင်းအိုးတည်တာကအစဆိုပါတော့ စိတ်တိုင်းမကျတာရှိရင် အသံထွက် ညည်းညူတက်တဲ့ အကျင့် ။ အဲမှာ ဖြစ်ပုံက သူရိုက်နေတဲ့ အလောင်းကောင်ရဲ့ လက်တစ်ဘက်က ရှာမရဘူးဖြစ်နေတာ ။ သူလဲ ပထမတော့ စိတ်ရှည်ရှည်ရှာသေးတယ် ။ နောက်တော့ မတွေ့တာနဲ့ ဟိုးခပ်လှမ်းလှမ်းတွေသွား ဖြစ်နိုင်မယ်.နေရာတွေကို လျှောက်ရှာရတော့တာပေါ့ ။ ဒါပေမယ်. မတွေ့ဘူး အဲဒီလက်က ။ ရထားသံလမ်းပေါ်မယ်ဆိုတော့ အေးကလဲအေး လေလေးကလဲတိုက် ဆိုတော့ သူလဲ ခပ်လေးလေးပဲ ဓာတ်မီးလေးထိုးလို့ ဟိုရှာဒီရှာ လုပ်ရင်း စိတ်ကလဲမရှည်တာနဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ညည်းတော့တာပေါ့ ။ " ဒီလက်ကလဲကွာ ဘယ်ချောင်ရောက်သွားပါလိမ့်ကွာ " ... "တောက်" စသဖြင့်ပေါ့ တစ်ယောက်ထဲပြောဆိုနေလေရဲ့ ။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ သူမမျှော်လင့်ထားတဲ့အဖြစ်အပျက် ....... သူ ကျက်သီးမွှေးညင်းတွေတစ်ဖြန်းဖြန်းထကုန်ပြီ ။ သူရဲ့အလုပ်သက်တမ်းတစ်လျှောက် ပထမဆုံးအကြိမ် အံ့ဩကြောက်ရွံ့စရာအဖြစ်ကြီး .... ။
" လက်က ဟိုမှာလေကွာ "
" ဒီရေမြောင်းထဲမှာလေကွာ " တဲ့ ။
သူ့ကိုပြနေတာက ဟိုးအလောင်းနားက လက်တစ်ဘက် ... မြောင်းဘောင်ကိုတစ်ဖြောင်းဖြောင်းရိုက်ပြီး လက်ညိုးထိုးပြနေတာ ။
သူတော်တော်ကြီး တုန်လှုပ်သွားတယ် ။ လက်ကြီးပဲ ။ စောနက လက်ပြတ်ကြီးတစ်ဘက်ထဲ ။ သူ့တစ်ကိုယ်လုံး အေးစက်တောင့်တင်းသွားတယ် ။ ပြီးတော့ သူချက်ချင်းတွေးတယ် ။ ဒါ စောနက ကျန်ခဲ့တဲ့ မှုခင်းရဲက သူ့ကိုစတာဖြစ်မယ်ပေါ့ ။ ဒါဆိုခုနက သူမသိတဲ့ အသံပိုင်ရှင်က ဘယ်သူလဲ ။ အသံကသူ့အနောက်ကလာတာ ။ ဒါနဲ့ ခေါင်းနပန်းကြီးပြီး လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ... ။ ခုနက ရထားတိုက်ခံထားရတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ ခေါင်းကြီးက သူ့အနောက်ကနေ ဒရွတ်ဆွဲကြီးလိုက်လာတာ ။ ပြောနေတာက အဲဒီခေါင်းကြီးကနေပြောနေတာ ။ သူ့ကိုလဲကြည့်လို့ ။ ပြီးတော့ ဆက်ပြောသေးတယ် ။ "ဟေ့ကောင် ဟိုမှာလေကွာ လက် " ... " သွားယူလေကွာ " ဆိုပြီး ပုံပျက်နေတဲ့ မျက်နှာကြီးကို မေးငေါ့ကာငေါ့ကာနဲ့ မြောင်းဘေးကလက်ကလဲ မြောင်းဘောင်ပေါ်မှာ တစ်ဖြောင်းဖြောင်းပုတ်ပြနေရဲ့ ။ ဒါပေမယ်. သူ ပြေးလို့မရတော့ဘူး ။ သူ့ခြေထောက်တွေက လှုပ်လို့မရတော့ဘူး ။ ဆောင်းညရဲ့ အအေးနဲ့ သူ့ရဲ့ အလောင်းကောင်ရှေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အဖြစ်က သူ့ကို အေးစက် တောင့်တင်းသွားအောင်လုပ်လိုက်တာ ။ သူ သူ့အနောက်က အလောင်းကောင်ကို သူ ပြန်လှည့်ကြည့်တယ် ။ သူ့ကို ဒရွတ်ဆွဲအတိုင်းကြီးပဲ ဖြီးဖြီးကြီးကြည့်ပြီး မြေကြီးပေါ်ကပဲ လဲလျှောင်းကြီးအတိုင်းကနေ ထဖို့ကြိုးစားနေတယ် ။ အလောင်းကောင်ရှေ့မှာ သူဘယ်လိုမှ ဆက်နေလို့ မရတော့ဘူးလို့ သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ သူ ရှိသမျှအားတွေအကုန်စု ဝုန်းကနဲပြေးတော့တာပေါ့ ။ ကန်မလဲကျကျန် ။ ဒရောသောပါးပြေးလာတုန်း ရထားလမ်းဘေးဟိုမှာဘက် ကားလမ်းပေါ်ကျမှ ဟိုသကောင့်သားရဲကို သွားတွေ့တော့တာ ။ အူယားဖားယားပြေးလာတဲ့သူ့ကို တအံ့တဩနဲ့ ဟေ့လူဘာဖြစ်လာတာလဲ ဆီးတားပြီးမေးပေမယ်. အဲဒီညက သူ ရဲစခန်းထိဘယ်လိုရောက်သွားမှန်းမသိအောင် သုတ်ချေတင်ခဲ့တာ ။
အဲဒီအဖြစ်အပျက်နောက်ပိုင်းမှာ သူ မှုခင်းဓာတ်ပုံဆရာအလုပ်ကို လုံးဝစွန့်လွှတ်ပစ်လိုက်တယ် ။ သူ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖတ်တွေက ဘယ်လိုဖြောင်းဖျဖြောင်းဖျ သူလုံးဝပြန်မလုပ်တော့ပဲနဲ့ စုထား ဆောင်းထားတာလေးတွေထုတ်လို့ နိုင်းငံခြားကို အလုပ်လုပ်ဖို့ထွက်လားပြီး နောက် ဟိုမှာပဲ အိမ်ထောင်တွေဘာတွေကျလို့ အခြေတကျနီးပါးဖြစ်နေပြီ။ ကျနော်နဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လောက်ကမှ စကားစပ်ဖြစ်ရင်းရဲ့ ကျနော်က ဒီပေ့(ချ)မှာ သရဲအကြောင်းတွေရေးတယ်ဆိုလို့ သူ့အကြောင်းကိုပြောပြတာ။
ဒီအဖြစ်အပျက်ကတော့ ကာယကံရှင် ကျနော်.မိတ်ဆွေဦးလေးတစ်ယောက်ပြောပြတဲ့အတိုင်းကို ကျနော်ဖတ်ကောင်းအောင် စာလေးစီလို့ သူငယ်ချင်းတို့ကိုပြန်ပြောပြတာပါ ။
အခြိနျက ၁၉၉၀ ကြျောလောကျအခြိနျက . . . ။ ဆောငျးတှငျးဘကျလဲဖွဈ ညဘကျလဲဖွဈတာနဲ့ သူလဲ ( သူဆိုတာ ကနြျောပွောတဲ့ မှုခငျးဓာတျပုံရိုကျတဲ့ ကနြျော.မိတျဆှတေဈယောကျ ) ထုံးစံအတိုငျး လကျဘကျရညျလေးသောကျ ဆေးလိပျလေးဖှာလို့ အိမျ့ရှေ့ ဝရနျတာမှာ အနျမတနျဇိမျကနြတောပေါ့ ။ ရာသီဥတုကအေးပမေယျ.လလေေးကတဖွူးဖွူးဆိုတော့ ရနှေေးကွမျးတဈအိုးနဲ့ ဟနျကပြနျကဖြွဈနတေုနျး ( .... ) မွို့နယျရဲစခနျးက ဖုနျးဝငျလာတယျ ။
အကွောငျးအရာကတော့ သူ့အလုပျပျေါလာတာ ။ သူ့အလုပျက မှုခငျးဖွဈတဲ့နရောတှမှော ဓာတျပုံလိုကျရိုကျရတာ ။ ဖွဈတာက မီးရထားလမျးပျေါမှာ လူတဈယောကျ ရထားတိုကျခံထားရတယျဆိုတဲ့ ။ ဒီတော့ ကနျမရာလေးဆှဲ ထှကျရတော့တာပေါ့ ။ ဟိုရောကျတော့ တှလေို့ကျရတဲ့ မွငျကှငျးက သိပျမဟနျဘူး ။ ဘာလို့ဆို လကျတှေ ခေါငျးတှေ ခွထေောကျတှကေ လိုကျကောကျရမဲ့ပုံစံဖွဈနပွေီ ။ လူနအေိမျလညျးဝေးတဲ့နရောဖွဈတာကတဈကွောငျး ... မှုခငျးဓာတျပုံဆရာဆိုတာမြိုးကလဲ သူမြားမရောကျခငျ မစဈဆေးခငျမှာ အမှုဖွဈထားတဲ့ ပုံစံကို ဦးဆုံးရိုကျယူရတဲ့တာဝနျဆိုတော့ မကျြမွငျတဈယောကျရယျ တာဝနျရှိသူတဈယောကျရယျပေါ့ ။ ဒါပဲရောကျသေးတယျ ။
အဲဒါနဲ့ သူလဲ အလောငျးကို တဈစစီဓာတျပုံလိုကျရိုကျရတာပေါ့ ။ အဲဒီဆောငျးညက အရမျးအေးတယျ ။ ဟိုးဘကျအဝေး ခပျပွပွလောကျမှာတော့ ဘူတာရုံလေးက မီးမှိနျမှိနျနဲ့ ငုတျတုတျ ။ မွူကလဲခပျဆိုငျးဆိုငျးနဲ့ ညတဈနာရီလောကျတော့ ရှိပွီနဲ့တူတယျ ။ ခုနကပွောတဲ့ မကျြမွငျသကျသေ သတငျးပေးသူကိုတော့ ရဲတဈယောကျလာပွီး စဈခကျြလေးဘာလေးယူဖို့ စခနျးကိုချေါသှားလရေဲ့ ။ ကနျြခဲ့တာ သူနဲ့ မှုခငျးရဲတဈယောကျရယျပေါ့ ။ သူ့အလုပျက လှယျတော့မလှယျဘူးရယျ ။ အခြိနျ နရော ဒသေမရှေး လိုကျရတာ ။ မှားလို့မဖွဈဘူး ။ ဒါနဲ့ သူလဲ အာရုံစိုကျပွီး အလောငျးရဲ့ အပိုငျးအစတှကေို ဓာတျပုံတဈဖတျြဖတျြနဲ့ လိုကျရိုကျနရေတာပေါ့ ။ ဟိုဘကျရှာ ဒီဘကျရှာနဲ့ ခေါငျးကိုသှားရိုကျလိုကျ ခန်ဓာကိုယျကိုသှားရိုကျလိုကျ မွပွေငျအနအေထားကိုသှားရိုကျလိုကျ နဲ့ ဆေးလိပျလေးဖှာလို့ အလုပျရှုပျနတော ။ အဲဒီအခြိနျမှာပဲ သူနဲ့အတူရှိနတေဲ့ ရဲက ဘယျပြောကျသှားတယျမပွောတကျဘူး ။ အဲဒါနဲ့ပဲ သူလဲ သူ့အလုပျကိုဆကျလုပျရတာပေါ့ ။
သူ့မှာအကငျြ့တဈခုရှိတယျ ။ သူက အလုပျလုပျရငျပဲဖွဈဖွဈ ... စာဖတျရငျပဲ ဖွဈဖွဈ ဥပမာ ထမငျးအိုးတညျတာကအစဆိုပါတော့ စိတျတိုငျးမကတြာရှိရငျ အသံထှကျ ညညျးညူတကျတဲ့ အကငျြ့ ။ အဲမှာ ဖွဈပုံက သူရိုကျနတေဲ့ အလောငျးကောငျရဲ့ လကျတဈဘကျက ရှာမရဘူးဖွဈနတော ။ သူလဲ ပထမတော့ စိတျရှညျရှညျရှာသေးတယျ ။ နောကျတော့ မတှတေ့ာနဲ့ ဟိုးခပျလှမျးလှမျးတှသှေား ဖွဈနိုငျမယျ.နရောတှကေို လြှောကျရှာရတော့တာပေါ့ ။ ဒါပမေယျ. မတှဘေူ့း အဲဒီလကျက ။ ရထားသံလမျးပျေါမယျဆိုတော့ အေးကလဲအေး လလေေးကလဲတိုကျ ဆိုတော့ သူလဲ ခပျလေးလေးပဲ ဓာတျမီးလေးထိုးလို့ ဟိုရှာဒီရှာ လုပျရငျး စိတျကလဲမရှညျတာနဲ့ ထုံးစံအတိုငျး ညညျးတော့တာပေါ့ ။ " ဒီလကျကလဲကှာ ဘယျခြောငျရောကျသှားပါလိမျ့ကှာ " ... "တောကျ" စသဖွငျ့ပေါ့ တဈယောကျထဲပွောဆိုနလေရေဲ့ ။
အဲဒီအခြိနျမှာပဲ သူမမြှျောလငျ့ထားတဲ့အဖွဈအပကျြ ....... သူ ကကျြသီးမှေးညငျးတှတေဈဖွနျးဖွနျးထကုနျပွီ ။ သူရဲ့အလုပျသကျတမျးတဈလြှောကျ ပထမဆုံးအကွိမျ အံ့ဩကွောကျရှံ့စရာအဖွဈကွီး .... ။
" လကျက ဟိုမှာလကှော "
" ဒီရမွေောငျးထဲမှာလကှော " တဲ့ ။
သူ့ကိုပွနတောက ဟိုးအလောငျးနားက လကျတဈဘကျ ... မွောငျးဘောငျကိုတဈဖွောငျးဖွောငျးရိုကျပွီး လကျညိုးထိုးပွနတော ။
သူတျောတျောကွီး တုနျလှုပျသှားတယျ ။ လကျကွီးပဲ ။ စောနက လကျပွတျကွီးတဈဘကျထဲ ။ သူ့တဈကိုယျလုံး အေးစကျတောငျ့တငျးသှားတယျ ။ ပွီးတော့ သူခကျြခငျြးတှေးတယျ ။ ဒါ စောနက ကနျြခဲ့တဲ့ မှုခငျးရဲက သူ့ကိုစတာဖွဈမယျပေါ့ ။ ဒါဆိုခုနက သူမသိတဲ့ အသံပိုငျရှငျက ဘယျသူလဲ ။ အသံကသူ့အနောကျကလာတာ ။ ဒါနဲ့ ခေါငျးနပနျးကွီးပွီး လှညျ့ကွညျ့လိုကျတော့ ... ။ ခုနက ရထားတိုကျခံထားရတဲ့ ခန်ဓာကိုယျကွီးနဲ့ ခေါငျးကွီးက သူ့အနောကျကနေ ဒရှတျဆှဲကွီးလိုကျလာတာ ။ ပွောနတောက အဲဒီခေါငျးကွီးကနပွေောနတော ။ သူ့ကိုလဲကွညျ့လို့ ။ ပွီးတော့ ဆကျပွောသေးတယျ ။ "ဟကေ့ောငျ ဟိုမှာလကှော လကျ " ... " သှားယူလကှော " ဆိုပွီး ပုံပကျြနတေဲ့ မကျြနှာကွီးကို မေးငေါ့ကာငေါ့ကာနဲ့ မွောငျးဘေးကလကျကလဲ မွောငျးဘောငျပျေါမှာ တဈဖွောငျးဖွောငျးပုတျပွနရေဲ့ ။ ဒါပမေယျ. သူ ပွေးလို့မရတော့ဘူး ။ သူ့ခွထေောကျတှကေ လှုပျလို့မရတော့ဘူး ။ ဆောငျးညရဲ့ အအေးနဲ့ သူ့ရဲ့ အလောငျးကောငျရှရေ့ငျဆိုငျနရေတဲ့အဖွဈက သူ့ကို အေးစကျ တောငျ့တငျးသှားအောငျလုပျလိုကျတာ ။ သူ သူ့အနောကျက အလောငျးကောငျကို သူ ပွနျလှညျ့ကွညျ့တယျ ။ သူ့ကို ဒရှတျဆှဲအတိုငျးကွီးပဲ ဖွီးဖွီးကွီးကွညျ့ပွီး မွကွေီးပျေါကပဲ လဲလြှောငျးကွီးအတိုငျးကနေ ထဖို့ကွိုးစားနတေယျ ။ အလောငျးကောငျရှမှေ့ာ သူဘယျလိုမှ ဆကျနလေို့ မရတော့ဘူးလို့ သိလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ သူ ရှိသမြှအားတှအေကုနျစု ဝုနျးကနဲပွေးတော့တာပေါ့ ။ ကနျမလဲကကြနျြ ။ ဒရောသောပါးပွေးလာတုနျး ရထားလမျးဘေးဟိုမှာဘကျ ကားလမျးပျေါကမြှ ဟိုသကောငျ့သားရဲကို သှားတှတေ့ော့တာ ။ အူယားဖားယားပွေးလာတဲ့သူ့ကို တအံ့တဩနဲ့ ဟလေူ့ဘာဖွဈလာတာလဲ ဆီးတားပွီးမေးပမေယျ. အဲဒီညက သူ ရဲစခနျးထိဘယျလိုရောကျသှားမှနျးမသိအောငျ သုတျခတြေငျခဲ့တာ ။
အဲဒီအဖွဈအပကျြနောကျပိုငျးမှာ သူ မှုခငျးဓာတျပုံဆရာအလုပျကို လုံးဝစှနျ့လှတျပဈလိုကျတယျ ။ သူ့ လုပျဖျောကိုငျဖတျတှကေ ဘယျလိုဖွောငျးဖဖြွောငျးဖြ သူလုံးဝပွနျမလုပျတော့ပဲနဲ့ စုထား ဆောငျးထားတာလေးတှထေုတျလို့ နိုငျးငံခွားကို အလုပျလုပျဖို့ထှကျလားပွီး နောကျ ဟိုမှာပဲ အိမျထောငျတှဘောတှကေလြို့ အခွတေကနြီးပါးဖွဈနပွေီ။ ကနြျောနဲ့ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈလောကျကမှ စကားစပျဖွဈရငျးရဲ့ ကနြျောက ဒီပေ့(ခြ)မှာ သရဲအကွောငျးတှရေေးတယျဆိုလို့ သူ့အကွောငျးကိုပွောပွတာ။
ဒီအဖွဈအပကျြကတော့ ကာယကံရှငျ ကနြျော.မိတျဆှဦေးလေးတဈယောကျပွောပွတဲ့အတိုငျးကို ကနြျောဖတျကောငျးအောငျ စာလေးစီလို့ သူငယျခငျြးတို့ကိုပွနျပွောပွတာပါ ။